Qoysas dadkii u shaqeyn jiray ku waayay daadadka Muqdisho oo wajahaya xaalad dhanka nolosha ah - Radio Ergo
Qoysas dadkii u shaqeyn jiray ku waayay daadadka Muqdisho oo wajahaya xaalad dhanka nolosha ah
(ERGO) – Daadadkii ka dhashay roobkii gu’ga ee bishan May ka da’ay magaalada Muqdisho ayaa saameyn nolooleed iyo mid hantiyeed ba ku yeeshay qaar ka mid ah dadka barakacay ee deggan xeryaha degmooyinka Dayniile, Hodan iyo Kaxda ee gobolka Banaadir.
Ifraax Ciise Cali oo walaasheed ay 12-kii bishan ku dhimatay daad soo galay gurigeeda, waxay sheegtay in hadda ay wajahayaan dhaqaalo xumo daran.
Gabadhan oo ah hooyada shan carruur ah oo ku nool xerada Al-cadaalla degmada Dayniile ayaa tilmaamtay in gabadha dhimatay oo 35 jir ahayd ay il dhaqaale u ahayd qoyskeeda, walaalaheed iyo waalidkeed oo 12 qof ka kooban.
Waxay qaban jirtay shaqada dhar-dhaqista oo labadii maalmoodba ay ka soo heli jirtay lacag dhan 130 kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta 5 doollar. Ifraax ayaa Raadiyo Ergo uga warrantay xaaladda ay hadda ku sugan yihiin.
“Annaga dhib mooye dheef ma helin, qof walba wuu niyad jabay. iyadaa noo wayneyd, iyada wiil iyo gabar noo ahayd. Waxay noo keento ayaan cunaynay. Hannoo yaraadaan, ha noo badnaadaan. Markay dhimatay wax la’aan iyo duruuf weyn baa na heshay.”
Ifraax oo leh uur sagaal bil ah, waxay sheegtay in hadda aysan shaqeyn karin isla markaana ay siddeed bil ka hor kala tageen saygeedu oo waxba ku soo kordhin reerkooda. Waxay hadda cunnaan cambuulo ay hal waqti u soo qaaraamaan qoysaska xerada la deggan.
Guryahooda ayaan ahayn kuwo u adkaysan kara roobabka iyo dabaylaha socda, waxaana sidoo kale ku soo dumay darbi u dhowaa oo daadku hoosta ka galay kaas oo sababay dhimashada walaasheed iyo saddex carruur ah oo ay dhashay.
Ifraax ayaa tilmaamtay in sidoo kale uu dhaawac soo gaaray sayga gabadha dhimatay iyo wiil la dhashay oo toban sano jir ah.
Sahro Cali ah oo ah guddoomiyaha xerada Al-caddaala ayaa noo xaqiijisay in daadka soo galay xerada ay ku geeriyoodeen toddobo qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar qof oo kale.
Waxaa ay xustay in ku dhowaad 50 qoys ay guryo la’aan ku noqdeen oo hadda aysan haysan meel ay ku hoydaan. Toban qoys ayay sheegtay in dadka deggan xerada ay u qeybiyeen baco iyo ulo ay iska soo uruuriyen si ay guryo ku dhistaan.
“Nolol aad u liidata ayeey ku nool yihiin wixii haray na meel ay ku nooladan bay rabaan mana haystaan maacuuntii iyo gogooshi waa uga baba’een wax ay heli karaan ma leh cidna uma maqna ceelna uma qodna,” ayey tiri Sahro.
Aamin Xasan Maxamed oo wiilkiisu ka mid noqday dad 12-kii May daadad ku dhintay ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in saameyn nololeed ay ku yeelatay geeridiisa maaddaama uu ahaa qofka keliya ee reerkooda u soo shaqeyn jiray.
Wiilkiisa oo Maxamed la dhihi jiray ayaa ku shaqeysanayay caseynimo. Wuxuu maalintii heli jiray lacag dhan 50 kun oo shilin Soomaali ah, taas oo qoyskiisa ka caawin jirtay in labo waqti ay wax karsadaan.
Aamin ayaa sheegay in hadda ay taasi meesha ka baxday noloshooduna ay ku jirto xaalad adag. Qoyska oo ka kooban afar carruur iyo hooyadood ayaa hadda hela cunada hal waqti oo ay ka caawiyeen dariskooda, maaddama aysan haysan cid kale oo u shaqeysa.
“Gurigayga asaga biili jirey aniga waxa ugu badana oo an ku shaqaysan jirey Dareewal ayaan ahaa Badamuundo dayda ayaa iska badneyd marna waan heli jiray shaqo marna waan waayi jiray. Laakiin isagu caseeyu guriga igu biili jirey wiilkayga igu weyn bu ahaa alxamdulilaah darbi ayaa ku soo dumay. Allaah baa qaddaray.”
Waxaa uu sidoo kale sheegay in geerida curadkiisa oo 19-jir ah ay ku soo beegantay xilli afar maalin ka hor da’dii ka yareyd ay koronto dishay, isagoo ka qeyb qaadanaya dhismaha guri ku yaalla meel aan ka fogeyn xerada oo ay leeyihiin dadka ag deggan xerada.
Roobka guga oo weli ka da’aya magaalada ayaa dadka barakacay yihiin kuwa ugu nugul ee uu saameeyo, iyadoo daadadku ay ku qaadeen cooshadihii ay degganaayeen. Waxay qaarkood noo sheegeen in haddii aysan helin gurmad deg deg ah ay khatar ugu jiraan daadadka kale ee imaan kara.